OnePlus6မှာ Notch ကို ဘယ်လို ဖျောက်မလဲ ? – DigitalTimes.com.mm
ဖုန်းများမှာ စကရင်ဧရိယာပိုမိုကျယ်လာစေဖို့ Notch များကို ထည့်သွင်းလာကြပါတယ်။ Notch များဟာ ဖုန်းရဲ့ အရွယ်အစားကို တိုးမြှင့်စရာ မလိုဘဲ စကရင်ကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် App များစွာဟာ Notch ကို မထောက်ပံ့သေးပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့် Video App တစ်ခုဖြင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ အခါမှာ Notch ဟာ ဗီဒီယိုရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကာနေမှာပါ။
OnePlus6ကို လိုချင်ပေမယ့် Notch ကို မကြိုက်သူများ အတွက်တော့ နည်းလမ်းရှိပါတယ်။ OnePlus6မှာ Notch ကို ဖျောက်ထားနိုင်တဲ့ စွမ်းရည် ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် OnePlus6ကို Notch မပါတဲ့ သာမာန် ဖုန်းလို သုံးနိုင်မှာပါ။
OnePlus6ရဲ့ Notch မှာ စပီကာ၊ Notification LED , Selfie Camera များ ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iPhone X မှာလို Depth-Mapping Sensor တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ OnePlus Company က ဖုန်း အရွယ်အစားကို ကြီးအောင် လုပ်စရာ မလိုဘဲ စကရင် အရွယ်အစားကို ကြီးမားအောင် လုပ်ဖို့အတွက် Notch က အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းလို့ ပြောပါတယ်။
Notch ကို ဖျောက်နည်း
ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Notch ကို မကြိုက်သူများအတွက် OnePlus6မှာ ဒီလို ဖျောက်နိုင်ပါတယ်။
•	Settings ထဲသွားပါ။ အောက်ဆင်းပြီး Display ကို နှိပ်ပါ။
•	Notch Display ထဲသွားပါ။ အဲဒီမှာ Notch ကို ဖျောက်ခြင်းနဲ့ ပြခြင်း စတဲ့ ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကို ပြသထားပါတယ်။
•	Hide the notch ကို ရွေးပေးပါ။ ဒါဆိုရင် ဆော့ဖ်ဝဲက Notch ရဲ့ ဘယ်ဘက်နဲ့ ညာဘက်ကို Notch အရောင်လို အနက်ဖြင့် ပိတ်ဖုံးလိုက်ပါတယ်။
အဲဒီအတွက် OnePlus6ဟာ Notch မပါတဲ့ ဖုန်းလို ဖြစ်သွားပါတယ်။ Notifications , Icons , Connectiviey Information , Battery Level များကိုတော့ Notch ရဲ့ ဘယ်နဲညာမှာ အရင်လိုပဲ ပြသပေးထားမှာပါ။ ဒါပေမယ့် Apps များအပါအ၀င် System တစ်ခုလုံးရဲ့ User Interface မှာ သူ့ကို လျစ်လျှူရှုထားမှာပါ။ App များကို သုံးရင်လည်း Notch က Content ကို ကာထားတာမျိုး မဖြစ်တော့ပါဘူး။ Notch ကို မဖျောက်ထားချင်ရင်တော့ Settings ထဲမှာ လွယ်ကူစွာ ပြန်လည် ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
OnePlus6မှာ Notch ကို ဘယျလို ဖြောကျမလဲ ?
ဖုနျးမြားမှာ စကရငျဧရိယာပိုမိုကယျြလာစဖေို့ Notch မြားကို ထညျ့သှငျးလာကွပါတယျ။ Notch မြားဟာ ဖုနျးရဲ့ အရှယျအစားကို တိုးမွှငျ့စရာ မလိုဘဲ စကရငျကို တိုးမွှငျ့ပေးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ App မြားစှာဟာ Notch ကို မထောကျပံ့သေးပါဘူး။ ဥပမာအားဖွငျ့ Video App တဈခုဖွငျ့ ရုပျရှငျကွညျ့တဲ့ အခါမှာ Notch ဟာ ဗီဒီယိုရဲ့ တဈစိတျတဈပိုငျးကို ကာနမှောပါ။
OnePlus6ကို လိုခငျြပမေယျ့ Notch ကို မကွိုကျသူမြား အတှကျတော့ နညျးလမျးရှိပါတယျ။ OnePlus6မှာ Notch ကို ဖြောကျထားနိုငျတဲ့ စှမျးရညျ ပါရှိပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ OnePlus6ကို Notch မပါတဲ့ သာမာနျ ဖုနျးလို သုံးနိုငျမှာပါ။
OnePlus6ရဲ့ Notch မှာ စပီကာ၊ Notification LED , Selfie Camera မြား ပါပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ iPhone X မှာလို Depth-Mapping Sensor တော့ မဟုတျပါဘူး။ OnePlus Company က ဖုနျး အရှယျအစားကို ကွီးအောငျ လုပျစရာ မလိုဘဲ စကရငျ အရှယျအစားကို ကွီးမားအောငျ လုပျဖို့အတှကျ Notch က အကောငျးဆုံး နညျးလမျးလို့ ပွောပါတယျ။
Notch ကို ဖြောကျနညျး
ဘယျလို အကွောငျးကွောငျ့ပဲ ဖွဈဖွဈ Notch ကို မကွိုကျသူမြားအတှကျ OnePlus6မှာ ဒီလို ဖြောကျနိုငျပါတယျ။
•	Settings ထဲသှားပါ။ အောကျဆငျးပွီး Display ကို နှိပျပါ။
•	Notch Display ထဲသှားပါ။ အဲဒီမှာ Notch ကို ဖြောကျခွငျးနဲ့ ပွခွငျး စတဲ့ ရှေးခယျြမှုနှဈခုကို ပွသထားပါတယျ။
•	Hide the notch ကို ရှေးပေးပါ။ ဒါဆိုရငျ ဆော့ဖျဝဲက Notch ရဲ့ ဘယျဘကျနဲ့ ညာဘကျကို Notch အရောငျလို အနကျဖွငျ့ ပိတျဖုံးလိုကျပါတယျ။
အဲဒီအတှကျ OnePlus6ဟာ Notch မပါတဲ့ ဖုနျးလို ဖွဈသှားပါတယျ။ Notifications , Icons , Connectiviey Information , Battery Level မြားကိုတော့ Notch ရဲ့ ဘယျနဲညာမှာ အရငျလိုပဲ ပွသပေးထားမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ Apps မြားအပါအဝငျ System တဈခုလုံးရဲ့ User Interface မှာ သူ့ကို လဈြလြှူရှုထားမှာပါ။ App မြားကို သုံးရငျလညျး Notch က Content ကို ကာထားတာမြိုး မဖွဈတော့ပါဘူး။ Notch ကို မဖြောကျထားခငျြရငျတော့ Settings ထဲမှာ လှယျကူစှာ ပွနျလညျ ပွငျဆငျနိုငျပါတယျ။
DC Superheroes များ တိုက်ခိုက်ရမယ့် Injustice 2